FAA na-eme ka efe efe na Hawaii dị nchebe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » FAA na-eme ka efe efe na Hawaii dị nchebe
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
FAA na-agbasawanye usoro mmemme igwefoto na Hawaii
Igwefoto ndị ahụ, nke arụnyere ugbu a na Alaska na Colorado, na-emezi nchebe site na ịnye ndị ọkwọ ụgbọ ala vidiyo oge dị nso nke ọnọdụ ihu igwe na ebe ha na-aga yana ụzọ ụgbọ elu ha chọrọ.
Ọrụ igwefoto ihu igwe na-eme ka nchekwa ụgbọelu na mkpebi mkpebi
Ọrụ Hawaii ga-etinye ụlọ ọrụ igwefoto 23 na agwaetiti niile
FAA guzobere otu ndị ọrụ ụgbọelu na ndị ọkachamara FAA n'agwaetiti ọ bụla
The Nchịkwa Federal Aviation (FAA) na-agbasawanye ọrụ igwefoto ihu igwe na Hawaii iji mee ka nchekwa ụgbọelu na mkpebi ndị na-anya ụgbọelu. Igwefoto ndị ahụ, nke arụnyere ugbu a na Alaska na Colorado, na-eme ka nchekwa dịkwuo mma site n'inye ndị na-anya ụgbọelu ihe nkiri ezigbo oge nke ọnọdụ ihu igwe na ebe ha na-aga na ụzọ ụgbọ elu ha chọrọ.
The Hawaii oru ngo a ga-etinye ihe igwefoto 23 na agwaetiti niile. FAA emechala nyocha oru injinia na ntaneti saịtị na Kauai, Lanai, Maui na Molokai, ma bido nyocha na Oahu na Big Island na Machị 2021.
FAA na-ezube ịmalite nrụnye igwefoto na Kauai na Machị ma kwaga n'agwaetiti ndị ọzọ ka ụlọ ọrụ ahụ na-ewepụta atụmatụ injinia, nweta mgbazinye na ikike ma nweta akụrụngwa ahụ. Agencylọ ọrụ ahụ na-atụ anya ihe oyiyi sitere na igwefoto Kauai ga-adị na weebụsaịtị igwefoto ihu igwe ya n'etiti 2021.
FAA guzobere otu ndị ọrụ ụgbọelu na ndị ọkachamara FAA n'agwaetiti ọ bụla iji chọpụta ebe kachasị maka nrụnye igwefoto yana iji hụ nkwukọrịta siri ike n'etiti ndị na-anya ụgbọelu na ụlọ ọrụ maka ọganihu ọrụ ahụ. FAA na-agbanye ọnọdụ saịtị n'okporo ụzọ ụgbọ elu na mpaghara ebe ọnọdụ ihu igwe na-emetụtakarị ma gbochie ọrụ ụgbọ elu.
Igwe igwe ihu igwe na Alaska enweela ihe ịga nke ọma ruo afọ 20. N'afọ gara aga, FAA nyeere Ngalaba Transportgbọ njem na Colorado aka itinye usoro igwefoto ihu igwe iji melite ịmatakwu ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe karịa Oke Rocky.